Google အားပုံများရှာရန် Gadget သတင်း
ဂူးဂဲလ်မရှိရင်ဘယ်လိုဘဝမျိုးလဲဆိုတာမှတ်မိလား။ ဖြစ်ကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အရာအားလုံးကိုအဖြေရရန်ရိုးရိုးလေးရှာဖွေရန်စီစဉ်ထားသည်။ အချို့သူများအတွက်၎င်းသည်ပျင်းရိခြင်းနှင့်အခြားဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်သည်။ အဓိကအချက်ကဒါပဲ ကြီးမားသော« G »၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှာဖွေခြင်းဖြင့်ရနိုင်သည်။ Google ကအရာရာကိုအများကြီးလွယ်ကူစေသည်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ပုံများနှင့်လည်းရှာဖွေနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။
Google မှပုံများကိုသင်ရှာနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မဆိုလိုပါ။ ၎င်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအသုံးအများဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ပြောမယ် ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံကို အသုံးပြု၍ အကြောင်းအရာကိုရှာဖွေပါ။ Google ၏ algorithm သည်၎င်းကို process လုပ်ပြီး၎င်း၏ "အဆုံးမဲ့" ဒေတာဘေ့စ်တွင်ရှာဖွေသည်။ ဒီကနေ့မှာ Google ကပုံတစ်ပုံနဲ့ဘယ်လိုရှာဖွေနည်းကိုရှင်းပြတယ်။
1 Google ပုံများနှင့်ရှာဖွေနိုင်သည်
1.1 ဒါကြောင့်သင်ဟာ Google Search ကိုပုံတစ်ပုံနဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင်မသိသေးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကခွင့်ပြုသည် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို အသုံးပြု၍ ရှာဖွေပါ။ များစွာသောနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်မယ့်ကိရိယာတစ်ခု။ ငါတို့ ကျနော်တို့ကအရမ်းဂရပ်ဖစ်စမ်းသပ်မှုပွုပါပွီ။ နှင့် ဂန္ထဝင်ကားတစ်စီး၏ပုံရိပ် ကွန်ပျူတာပေါ်မှာငါတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ တိကျတဲ့မော်ဒယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါတို့သိချင်တယ်။ ဓာတ်ပုံကို အသုံးပြု၍ ဂူဂဲလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပုံမှန်ရှာဖွေခြင်း၊ သက်ဆိုင်သောစာမျက်နှာများနှင့်ရလဒ်များကိုပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အားဒေတာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်။
မော်ဒယ်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကားတစ်စီးထုတ်လုပ်သည့်နှစ်သည်ဥပမာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အရမ်း ကျနော်တို့ပုံရိပ်ရှာဖွေရေးကိုသုံးနိုင်သည် Facebook မှာသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုသိဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Facebook မှာသူဘယ်သူလဲဆိုတာသိဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်တောင်မှ အဆောက်အ ဦး သို့မဟုတ်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး နှင့်အတူသိရန် မင်းနာမည်၊ မြို့ကဘယ်မြို့လဲ။ ပုံတစ်ပုံတည်းကိုပဲသုံးပြီးရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာ Google Search ကိုပုံတစ်ပုံနဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်
1- ရိုက်ထည့်ပါ Google (ယုတ္တိရှိသလော)
2 ၌ ညာဘက်ထောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူအကောင့်ပုံ၏နောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုရန် "squares" ကိုရှာသည်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ Gmail နဲ့ Images ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပုံများကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
၃။“ ပုံများ” ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဂူဂဲလ်ပုံစံပြောင်းလဲသွားသည် ရှာဖွေရေးဘားဘေးတွင်ဓာတ်ပုံကင်မရာအိုင်ကွန်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ ထို icon ကိုနှိပ်ရမည် (ပုံဖြင့်ရှာဖွေပါ)
၄ ယခုငါတို့တွေ့ပြီ ပုံရိပ်ရှာဖွေရေးအတွက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် တိုက်ရိုက် url ကို paste လုပ်ပါ ပုံ၏သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှတင်ပါ ငါတို့ရှာဖွေချင်သောဓာတ်ပုံ။ ရွေးချယ်မှုပုံကို upload တင်၍ select file ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ သတင်းအချက်အလက်တွေရချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွေးလိုက်တယ် နှင့်ဤ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သို့တင်လိမ့်မည် ရှာဖွေမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန် (အ redundancy ကိုခွင့်လွှတ်ပါ) ။
၆။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျနော်တို့ပုံရိပ်နှင့်အတူရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုရ။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမဟုတ်သောအရာများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ဘရောင်ဇာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
၇ ပုံများနှင့်အတူအခြားရွေးချယ်စရာ google ရှာဖွေမှု option ကို အဆင့် ၂ ကနေစပြီးငါတို့သုံးနိုင်တယ်၊ ဓာတ်ပုံကင်မရာရဲ့အိုင်ကွန်ကိုမြင်ရတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်က image search interface, လိုချင်သောပုံကို Google search bar သို့ဆွဲတင်နိုင်သည်။ ဖြန့်ချိသောအခါရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည်။ ဒီ option ကိုနောက်ဆုံးထားထားပါတယ်၊ ရရှိသောရလဒ်များအများကြီးလျော့နည်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည် ရှာဖွေမှုသည်လိပ်စာပေါ်တွင်အခြေခံသည် ပုံကိုဘယ်ကရလဲ၊ ထိုသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် သူမအတွက် ကျွန်တော်ဖိုင်ကိုပေးပြီအမည်.
ဂူဂဲလ်မှရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေရန်ဤရွေးချယ်မှုကိုသင်အတော်များများသိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမသုံးသောသူများအတွက်အရာများသို့မဟုတ်လူတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်ရှာဖွေမှုအချို့သူတို့ကြုံတွေ့ရမည်မှာသေချာသည်။ ဂူဂဲလ်သည်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကူအညီဖြစ်စေမည့်ရွေးချယ်စရာများနှင့်ကိရိယာများကိုပိုပေးသည်။ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း, သင်စမ်းသပ်မှုနှင့်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသော browser ၌ r မည်သည့်ရုပ်ပုံမဆို မင်းစဉ်းစားလို့ရတယ် ငါတို့သည်သင်တို့ပြီးသားကြောင်းသတိပေးပေမယ့် ရလဒ်သမားရိုးကျရှာဖွေမှုများနှင့်ဝသကဲ့သို့ "ဒဏ်ငွေ" မရှိကြပေ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » Google အားပုံများဖြင့်မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း
Yi 1080p မူလကင်မရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း